8 Yakanakisisa Ekuzvarwa Mazano | Save A Train
musha > Kufamba U.S.A. > 8 Yakanakisisa Ekuzvarwa Mazano
Gore rino une mukana wekutsvaga zvishamiso zvepasi sezvo mitemo yekufamba ichiramba ichifarirwa. Nzvimbo dzekuzorora idzo dzakange dzakavharwa kare dzinovhurwa zvishoma nezvishoma nyika ichichinja kurarama nedenda. Heano 8 Yakanakisa Yemazuva Ekuzvarwa Mazano Mu 2021 kuti unofanira kufunga.
Dzidzisai pakufamba ndiyo yakanyanya kugadzikana fomu yekufamba. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
Iyi nharaunda iri kumabvazuva kweMassachusetts uye ndiyo imwe yenzvimbo dzakashanyirwa zvakanyanya kuEast Coast. mu 2021, ichiri pamusoro machati seimwe yenzvimbo dzakanakisisa dzekushanya kwekuzvarwa. Pane zvakawanda zvaunofanira kuona munzvimbo ino kusanganisira mahombekombe akanaka, mumapaki, nhoroondo yezvivheneko, uye yakawanda yekuvaraidzwa kwechisikigo. Paunenge uchishanyira guta rino, zvakakosha kuti utsvage pekugara pakachengeteka. Kubhadhara zororo kunoita sarudzo yakanakisa kana zvasvika pane izvi. Panzvimbo pekugara mukamuri yakamanikana yehotera, iwe unogona kusarudza kugara mune imwe yezvakawanda uye yakasarudzika Cape Cod dzimba dzekuzorora. Izvi zvinokupa iwe semusha-senge kunzwa nekuti iwe unokwanisa kuwana zvinowanika senge kicheni uye yekuwachira imba uye zvishandiso senge HVAC midziyo. Izvi zvinouya zvinobatsira kunyanya kana vaifamba mhuri sezvo iwe uchave nemukana wekugadzira zvinonaka uye nekuchenesa panguva yako yekugara. Pamusoro pe, kune imwe nhanho yekuvanzika mune yekurenda yezororo uchienzaniswa nehotera.
2. Yakanakisa Yemazuva Ekuzvarwa Mazano Mu 2021: Alaska
Kunyangwe kuve kwakaparadzaniswa nenyika kubva kuUnited States, Alaska ndeimwe yenzvimbo dzinonakidza uye dzinoyevedza kushanyira. Ndiyo nzvimbo yakakwana yekuzvarwa yezororo remuchadenga nevana. Paunoenda kune ino chikamu chenyika, iwe uchazosvika pakuona kure maaizi echando, makomo akakwira, hukuru hono, 12ft-kureba mabheya, uye akawanda emahombekombe egungwa. Pakati penzvimbo dzepamusoro dzaunogona kushanyira muAlaska pane iyo Denali National Park, kwaunosvika pakuona mabheya, mhumhi, uye mhembwe. Iwe zvakare uchawana mukana wekufamba uchitevedza Savage Rwizi sezvo iwe uchiyemura iyo yakadzikama mvura. Kana iwe uchida hove, iwe unogona kuwana mukana wekushanyira nzvimbo yekuredza yeAlaska, Homer. Mukuwedzera, unogona kubva murenje woenda kuAnchorage rinova iro iguta rakakura muAlaska. Paunoshanyira Alaska nemhuri, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti iwe unoshanyira iyo Arctic Circle Zuva Rwendo kubva kuFairbanks neMatanuska Glacier Rizere zuva Rwendo. Aya marwendo maviri achapedzisa yako Alaskan zororo.
3. Grand Canyon muArizona
Kunyangwe kuwana vanosvika mamirioni mashanu vashanyi pagore, Grand Canyon ichiri pakati penzvimbo dzakanakisa dzekushanyira mukati 2021. Ndiyo inonyanya kuzivikanwa chiratidzo muUnited States uye inoratidzika yakanaka kubva kumativi ose. Unogona kuenda kunokwira nzvimbo ino kana kutora helikopta kuti unakirwe nenzvimbo kubva pane yekuona yemuchadenga. Iwe unogona kuwana iyo yekuchamhembe neSouth Rims kubva kumativi akatarisana ecanyon. Vanhu vazhinji vanosarudza kushanyira iyo Grand Canyon National Park's Maodzanyemba Rim nekuti inogara yakavhurika kunyangwe munguva yechando. Unogona kutora zvifambiso zvemumugwagwa zvakavanzika kana kushandisa mabhazi ekushanya munzvimbo ino kunakidzwa nemaonero erenje. KuGree Canyon, unogona kusvika kuona kupfuura 447 marudzi eshiri aripo, musasa usiku hwose murenje, uye kutora chikamu mune zvinonakidza zviitiko senge rafting. Munharaunda ino, mikana yekunakidzwa haiperi!
4. Yakanakisisa Yekuzvarwa Yekufamba Idea In 2021: Crater Lake National Park
Inowanikwa muOregon, Crater Lake inogara makumi mashanu nematatu mativi emakiromita. Dziva rinogara mukati meGomo reMazama iro rakaumbwa pamusoro 7000 makore apfuura nekuputika. Iine mvura yebhuruu iyo inopa inoshamisa kuratidzwa iyo inokusiya iwe uchishamisika. Kunaka kwedziva iri ndiko unogona kuenda kusvetuka kweinenge 2000ft kana iwe uchifarira iyo mhando yekunakidzwa. Kuti unakidzwe nerwendo rwako kunzvimbo ino, iwe unofanirwa kupedza mazuva matatu uchiongorora zvese zvishamiso zvinopihwa nedziva.
5. Disney Nyika
Wokupedzisira pane zvakanyorwa ndiDisney theme parks uye nzvimbo dzekugara muOrlando. Iyi nzvimbo inonakidza inoita nzvimbo yakanakisa yekufambisa zuva rekuzvarwa kune avo vanhu vakanyoroveswa kubva kune kwavo kwezuva nezuva zviitiko. Izvi zvinonyanya kuitika kune vanamukoti vane chitupa vachangopedza iyo NCLEX RN bvunzo uye vari kuda zororo rinonakidza. Rombo rakanaka kwavari, kubvira gore rakatanga, mapaki mazhinji akavhurwa uye akagadzirira bhizinesi. Tichifunga nezvekufarirwa kwazviri, ino nzvimbo inowanzo kuve yakazara saka uchafanirwa kuronga kushanya kwako zvine hungwaru. Kuti unakidzwe nekugara kwako, iwe uchafanirwa kugara pamusoro 6-7 mazuva. Zvimwe zvinokwezva zvaunoshambadzald inotarisira kuona inosanganisira maPirates eCaribbean, Ndege yaPeter Pan pakati pevamwe.
6. Akanakisa Ekuzvarwa Ekufambira Nzvimbo Mune 2021: Venice MuItaly, Europe
Inowanikwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweItari, Venice inzvimbo yekuona vafambi. Ndiyo guta guru renharaunda yeVeneto uye inoumbwa ne 118 zviwi zvidiki zvakaparadzaniswa nemigero. Aya zviwi akabatanidzwa neanopfuura 400 mabhiriji. Hakuna migwagwa, zvichireva kuti hapana traffic ine ruzha. Vanhu vanofamba nezvikepe mumigero, kushandira vashanyi nezvimwe zvinoratidzira zvisinga gonekwe kumwe kunhu. Venice inoonekwa seimwe remaguta akasarudzika pasirese, kuinyorera seimwe yenzvimbo dzepamusoro dzevafambi nevatori vemifananidzo mukati 2021. Uyezve, Venice inozivikanwa kunge inoshamisa kudanana muhunhu hwayo. Venice zvakare inokwidza akawanda ezvinyorwa zveakanyanya maguta dzakanaka munyika. Imhaka yekumwe kwayo isina-mugwagwa unopihwa, dzinoyevedza zvivakwa zvivakwa, uye enhoroondo zvinhu zvakawanikwa kwese pamusoro pekuvakwa kwayo.
7. Yakanakisisa Ekuzvarwa Kwekuenda Kwako Ku 2021: Lake Baikal, Rashiya
Kuve iyo nyika hombe pasirese, Russia ine zvakawanda zvekupa kusanganisira mahombekombe, makomo, uye zvivakwa zvine nhoroondo. zvisinei, Gungwa reBaikal ndiro rakanyanya kunhonga vafambi nevatori vemifananidzo. Ndiyo imwe yemakungwa ekare-anozivikanwa pasi rose, nemishumo yakawanda ichiti inopfuura 25 miriyoni yemakore. Iro zvakare idziva rakadzika kwazvo pasi, inosvika pakadzika zvakadzika zve 1642 mamita. Chii chimwe? Baikal ndiro dziva rakakura kwazvo risina mvura pasi rose. Kupfuurisa 20% yemvura yepanyika yepanyika inogara mudziva iri. Zvekutenderedza 5 mwedzi pagore, nyanza inogara yakafukidzwa nepasi pechando chakakora. zvisinei, zvichiri kugona kuona zvakadzika se 40 mamita pasi payo. Zvekutenderedza 10 mwedzi pagore, mvura yaro inogara pasi pechando chando che 5 madhigirii Celcius. zvisinei, kutenderera mwedzi waNyamavhuvhu, tembiricha yayo inokwira kusvika 16 celsius, ichiita kuti ive yakanaka kukurumidza kushambira uye kunyura.
8. Iyo Huru Rusvingo rweChina
Kunyangwe hazvo China yakakura ikava nyika yehunyanzvi hwehunyanzvi nhasi, haisati yarasa runako uye kufadza kwayainayo payakatanga kuwanikwa. Pane zvakawanda zvinoshamisira uye zvakavanzika nezve China, asi iyo Great Wall inokwira pamatanho ese uye masosi. Maererano neshoko rakakurumbira reChinese, "Hapana munhu anogona kuve gamba rechokwadi kutoti anga ari paGreat Wall". Kuwedzera kupfuura kureba kwe 6000 makiromita, ichi chiyeuchidzo chikuru ndechimwe chorudzi rwayo, uye inofanirwa-kushanya kune wese mufambi. Kureba kwayo kwepakati kwakatenderedza 6 kuti 8 mamita, zvisinei, inopfuura zvinopfuura 16 metres pakukwirira kwayo kwepamusoro. Iyo yakafara zvakakwana kuti inopfuura 10 vanofamba vanogona kufamba parutivi parutivi. Rusvingo rune masvingo mazhinji anoyevedza, zvisinei, ekare-kare ndeekare akanyorwa kutenderedza kusvika muzana ramakore rechinomwe BC. Iyo Great Wall ndeye kamwe-mu-mu-hupenyu chiitiko icho chisingafanire kupotsa chero mutengo.
8 Yakanakisa Yemazuva Ekuzvarwa Mazano Mu 2021: mhedziso
Kunyange iwe ungave wakanzura zororo rako mu 2020 nekuda kwedenda, unogona kutora rwendo irworwo gore rino. zvisinei, ita shuwa kuti iwe unotora matanho ese ekuchengetedza pane yako Mari yekufambisa. Iwe unofanirwa kuva nechinangwa chekushanyira Cape Cod, Alaska, iyo Grand Canyon, Crater Lake, uye Disneyworld. Tanga kuronga rwendo rwako nhasi kuti unakirwe nekufamba kwako. Tinosarudza kufamba nechitima zvakanyanya sezvaunogona kuti iwe ugone kunakidzwa nemaonero akanyanya.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga imwe yeiyi 8 Yakanakisa Yemazuva Ekuzvarwa Mazano Mu 2021 nechitima.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "8 Yakanyanya Kufambira Kwako Kusvikira Muna 2021" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fbest-birthday-travel-ideas%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura iyo / fr kuita / ru kana / de uye mimwe mitauro.
BestDestinations bhavhdhe kambasi TravelDestinations TravelDestinations2021 TravelingDuringPandemic